समाचार Archives - Page3of 1100
चैत १०, २०७५ बिगुल
पर्सा, विभिन्न अपराधमा कैद सजाय भोगिरहेका १९ युवा आज वीरगञ्जबाट मध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई)मा सहभागी भएका छन् । एसइई परीक्षाको आज पहिलो दिन नियमित अङ्ग्रेजी विषयको परीक्षामा वीरगञ्ज कारागारबाट १६ …
सेनाको मेडिकल कलेजले रेकर्ड तोड्यो : शत प्रतिशत नतिजा ल्याउन सफल !
काठमाडौँ, नेपाली सेनाले आफ्नो स्वास्थ्य विज्ञान संस्थानअन्तर्गत चिकित्साशास्त्र महाविद्यालयबाट एमबिबिएस दोस्रो समूहको अध्ययन पूरा गरेका सफल विद्यार्थीलाई बधाई ज्ञापन गरेको छ । सैनिक मुख्यालयमा चैत ८ गते आयोजित समारोहमा उक्त …
‘लिभिङ टुगेदर’को ट्रेन्ड : आफ्नो स्वार्थ पूरा गरी पुरुष बेपत्ता भएपछि महिलाहरुको बिजोक !
काठमाडौं, : पछिल्लो समय ‘लिभिङ टुगेदर’ को परम्परा देखिएसँगै राष्ट्रिय महिला आयोगमा त्यससँग सम्बन्धित उजूरी पनि बढ्न थालेका छन् । आर्थिकसँग सम्बन्धित नभई ‘सम्बन्ध स्थापित गरी पाउँ’ भन्ने खालका उजूरी …
विप्लवले चैत १४ गतेभित्र १० लाख दिन भनेपछि गाँउपालिकाका कर्मचारीले कार्यालय छोडे !
चैत १०, २०७५ PS
काठमाडौँ : नेत्र विक्रम चन्द “विप्लव” नेतृत्व को नेपाल कम्नियुष्ट पार्टी (नेकपा) ले चन्दा आतंक मच्चाएपछि गाँउपालिकाका कर्मचारीले कार्यालय छोड्न थालेका छन्। नेकपा वीरगञ्जका इन्चार्जले नगद चन्दा माग गरेपछि पहाडी …
निर्मला हत्या प्रकरण : प्रमाण नष्ट गर्ने डिल्लीराज विष्टलाई अदालतले दियो यस्तो आदेश !
काठमाडौँ- निर्मला पन्त हत्या प्रकरणमा प्रमाण नष्ट गरेको र यातना दिएको मुद्दामा जिल्ला अदालत कञ्चनपुरले तत्कालीन एसपी डिल्लीराज विष्टलाई १० लाख धरौटी बुझाएर रिहा हुन पाउने गरि फैसला सुनाएको छ …
सँगै काम गर्ने युवतीलाई पोर्चुगल पुगेका एक नेपालीले बलात्कार गरेपछि…
काठमाडौँ- युवतीलाई बलात्कार गरेको आरोपमा एक नेपाली पोर्चुगलमा पक्राउ परेको जानकारी प्राप्त भएको छ। पक्राउ पर्ने नेपालीको उमेर लगभग ३५ रहेको बताइएको छ। यधपी उनको नाम भने खुलाइएको छैन। सँगै …
हाइसको ठक्करबाट १३ वर्षीय बालकको मृत्यु , सहचालक गम्भीर, चालक सामान्य !
काठमाडौँ : आईतबार बिहान मोरङमा माइक्रोबसको ठक्करबाट एक बालकको मृत्यु भएको छ। मोरङको सुन्दरहरँैचा नगरपालिका–८ स्थित पूर्वपश्चिम राजमार्गमा माइक्रोबसको ठक्करबाट सुनसरी, धरान उपमहानगरपालिका बस्ने १३ वर्षीय सबिन मग्रातीको घटनास्थलमै मृत्यु …
हिउँदे अधिवेशनको अन्तिम दिन आज ! प्रधानमन्त्री ओलीले किन गर्दैछन् सम्बोधन …
काठमाडौँ : संसदको हिउँदे अधिवेशनको अन्तिम दिन आइतबार(आज) प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सम्बोधन गर्ने भएका छन्। हिउँदे अधिवेशन आइतबार अन्त्य हुने भएकाले प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्ना भनाइहरु राख्ने र संसदमा उठाइएका …
विप्लवका ठूला नेता पक्राउ पर्न थालेपछि कड्किए मोहन बैद्य ! निकाले यस्तो विज्ञप्ति !
काठमाडौँ- मोहन वैद्य ‘किरण’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (क्रान्तीकारी माओवादी) विप्लव नेतृत्वको नेकपाका स्थायी समिति सदस्य हेमन्त प्रकाश वली सहित अन्य ८ पक्राउ परको प्रति आपत्ति जनाएको छ। शनिबार साँझ …
अनियन्त्रित माइक्रोबसले ठक्कर दिँदा १३ वर्षीय सबिनको घटनास्थलमै मृत्यु !
उर्लाबारी, मोरङको सुन्दरहरैँचा नगरपालिका–८ स्थित पूर्वपश्चिम राजमार्गमा आज बिहान माइक्रोबसको ठक्करबाट एक बालकको घटनास्थलमै मृत्यु भएको छ । पूर्वबाट पश्चिमतर्फ जाँदै गरेको बा५ख ३५४ नंको हायस माइक्रोबस आफैँ अनियन्त्रित भई …
Previous 1234… 1,100 Next